Breathable ကာတွန်းပုံနှိပ်ထားသော Seamless ချည်သားဘောင်းဘီတိုများ - ပို့ဆောင်ခအခမဲ့နှင့်အခွန်မပါ | WoopShop®
ယုံကြည်ချက်ဖြင့် ၀ ယ်ပါ အံ့သြဖွယ်အရာတို့ကိုရှာပါ
★အဘယ်သူမျှမ VAT ကိုစွဲချက်
$ 9.99 လက်အောက်တွင်
အသက်ရှူ။ မဝသောကာတွန်းပုံနှိပ်ထားသော Seamless ချည်သားအမျိုးသမီးဘောင်းဘီများ
$4.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $8.99
အရောင် paw အောက်ခြေပုံနှိပ် မြင်းပြာ အနက်ရောင်စာ အဖြူရောင်လေးကို စတော်ဘယ်ရီအဖြူ
အရွယ် L XL
အောက်ခြေဖောင့် / L အောက်ခြေဖောင့် / XL မြင်းပြာ / L မြင်းပြာ / XL အနက်ရောင်စာလုံး / L အနက်ရောင်စာလုံး / XL အဖြူရောင် L / L အဖြူရောင် / XL အဖြူရောင်စတော်ဘယ်ရီ / L အဖြူရောင်စတော်ဘယ်ရီ / XL
အသက်ရှူမဝသောကာတွန်းရိုက်နှိပ်ထားသော Seamless Cotton အမျိုးသမီးဘောင်းဘီများ - အောက်ခြေဖောင် / L backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ - မဟုတ်ပါ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံပြုချက် - မဟုတ်ပါ
panties အမျိုးအစား: အကျဉ်းချုပ်
pattern အမျိုးအစား: ပရင့်ထုတ်ရန်
အရောင်ပုံစံ: အဖြူ၊ အနက်၊ ပန်းရောင်
အမျိုးအစား: အစိုင်အခဲ၊ ဘောင်းဘီတို၊ အမျိုးသမီးများအတွက်အတွင်းခံ
L အရွယ်အစား: ခါး: 60-70 စင်တီမီတာ, တင်ပါး: 95 စင်တီမီတာ
XL အရွယ်အစား: ခါး ၇၀-၇၅ စင်တီမီတာ၊ တင်ပါး ၁၀၀ စင်တီမီတာ
85 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ.
ငါမှန်ကန်တဲ့အတိုင်းအတာကိုရွေးချယ်ပြီးမှန်တယ်ဆိုရင်ငါကြောက်တယ်။ သူတို့သည်အလွန်ချစ်စရာကောင်းသည်၊ အလွန်မြန်သည်၊ ၀ ယ်ယူမှုကိုအပြည့်အဝကျေနပ်သည်၊ ငါအနာဂတ်၌ထပ်မံ ၀ ယ်သည်
ဘောင်းဘီကပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းခပ်မိုက်မိုက်ဘဲ။ ငါတို့အဲဒီကိုမြန်မြန်ရောက်ခဲ့တယ်။ အမိန့်ကိုကျေနပ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင်အမိန့်ထုတ်ခံရသောစက်တင်ဘာ ၃ ရက်တွင်ကာဇန်ရှိအထွေထွေပါဆယ်ထုပ်ကိုပိုကြီးသောအရွယ်အစား ၂ ခုယူပါ။ ဆင်းသက်မှုနိမ့်သည်၊ ချည်မျှင်များရှိခဲ့သည်။ ပြီးတော့အတော်လေးပုံမှန်ဘောင်းဘီ
WoopShop: အွန်လိုင်းစျေး ၀ ယ်နှင့်လက်ကားရောင်းချရန်အကောင်းဆုံးဆိုက်ဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်အားလုံးအတွက်လက်ကားရောင်းချသည်။ အ ၀ တ်အထည်များ၊ လက်ဝတ်လက်ကားများ၊ ကျန်းမာသောလက်ကား၊ အလှအပလက်ကား၊ ဖက်ရှင်လက်ကားစသည့်လက်ကားစျေး ၀ ယ်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ မင်းကယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ ကလေးတွေအတွက်အွန်လိုင်းဈေးဝယ်တာကိုအကောင်းဆုံးခံစားချင်ရင်တော့မင်းကနေရာမှန်မှာဘဲ။ WoopShop သည်ဖက်ရှင်နှင့်လူနေမှုပုံစံစသည့်အဓိက ဦး တည်ရာဖြစ်သည်။ အဝတ်အစား၊ ဖိနပ်၊ အပိုပစ္စည်းများ၊ လက်ဝတ်ရတနာ၊ မင်းရဲ့ style statement ကိုငါတို့ရဲ့ခေတ်မှီပစ္စည်းတွေနဲ့အသစ်ပြန်သတ်မှတ်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းစတိုးသည်သင့်အားဖက်ရှင်အိမ်များမှဒီဇိုင်းထုတ်ထုတ်ကုန်များထဲမှနောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်များကိုသယ်ဆောင်လာသည်။ WoopShop မှအွန်လိုင်းစျေး ၀ ယ်ခြင်းမှသင်၏အိမ်သက်တောင့်သက်သာရှိစေပြီးသင်၏အကြိုက်ဆုံးများကိုသင်၏အိမ်တံခါးသို့ရောက်အောင်ပို့နိုင်သည်။ ဖက်ရှင်အတွက်အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းစျေး ၀ ယ်ဆိုက်နှင့်ဖက်ရှင်အတွက်ထိပ်တန်းအီလက်ထရွန်နစ်အက်ပလီကေးရှင်းများ၊ ၀ တ်ဆင်ခြင်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးတွေအတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း။ ကွဲပြားခြားနားသောအခါသမယများတွင်သင် ၀ ယ်ယူနိုင်သော ၀ တ်စုံအမျိုးအစားများအတွက်ကောင်းကင်သည်အကန့်အသတ်သာဖြစ်သည်ကိုသင်သဘောပေါက်လိမ့်မည်။ အမျိုးသားဝတ်အဝတ်အထည်များ - WoopShop တွင်စမတ်ကျသောရှပ်အင်္ကျီများ၊ ဘောင်းဘီများ၊ အေးမြသည့်တီရှပ်များနှင့်ဂျင်းဘောင်းဘီများတွင်များစွာသောရွေးချယ်စရာများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်အမျိုးသားများအတွက် kurta နှင့် pajama ပေါင်းစပ်ခြင်းများ။ သင်၏သဘောထားကိုပုံနှိပ်တီရှပ်များနှင့်ဝတ်ဆင်ပါ။ varsity တီရှပ်များနှင့်ဒုက္ခရောက်နေသောဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်အတူနောက်ကျော -to- ကျောင်းဝင်း Vibe ဖန်တီးပါ။ ကျွဲကောပဲ၊ ၀ င်းဒိုးစတိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရှပ်အင်္ကျီတွေဟာထူးခြားဆန်းကြယ်တယ်။ သူတို့ကိုပုံမှန်ချောချောမွေ့မွေ့ကြည့်ရှုရန်အတွက် chinos, cuffed jeans သို့မဟုတ်ဖြတ်ထားသောဘောင်းဘီတိုများနှင့်အတူစုစည်းပါ။ ဆိုင်ကယ်အကျီများနှင့်အတူစတိုင်အသွင်အပြင်ကြည့်ရွေးချယ်ပါ။ ရာသီဥတုဆိုးရွားသည့်အချိန်တွင်ရေစိုခံနိုင်သောအကျိတ်များနှင့်အတူထွက်ခွာပါ။ မည်သည့် ၀ တ်စုံတွင်မဆိုယုံကြည်မှုရှိစေမည့်အထောက်အကူပြုအဝတ်အစားများကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းအဝတ်အစားကဏ္ section ကိုရှာဖွေပါ။ ခေတ်မှီသောအမျိုးသမီးအဝတ်အထည်များ - WoopShop ရှိအမျိုးသမီးများအတွက်အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်းသည်စိတ်ခံစားချက်မြင့်မားစေသောအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ ဒီနွေရာသီမှာတင်ပါးဆုံရိုးကိုကြည့်ပြီးကြံ့၊ အနည်းငယ်သောအနက်ရောင်ဝတ်စုံဖြင့် ၀ တ်ထားသောသင့်ရက်စွဲကိုကြည့်ပါ။ သို့မဟုတ် sassy vibe အတွက်အနီရောင် ၀ တ်စုံကိုရွေးချယ်ပါ။ အစင်းပါသောဆင်မြန်းမှုများနှင့်တီရှပ်များသည်ရေကြောင်းဖက်ရှင်၏စိတ်ဓာတ်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အနည်းငယ်နာမည်ပေးရန် Bardot၊ ပခုံးပြင်၊ ရှပ်အင်္ကျီ၊ blouson, ပန်းထိုးနှင့် peplum ထိပ်များထဲမှသင်အကြိုက်ဆုံးကိုရွေးချယ်ပါ။ သူတို့ကိုဂျပိန်ဂျင်းဘောင်းဘီ၊ စကတ်၊ Kurtis နှင့်ဂျင်းဘောင်းဘီများသည်အေးမြသော urbanite အတွက် fusion-wear ပေါင်းစပ်မှုကိုပြုလုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခမ်းနားကြီးကျယ်ခမ်းနားသော sarees နှင့် lehenga-choli ရွေးချယ်မှုများသည်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲများကဲ့သို့ကြီးမားသောလူမှုရေးပွဲများကိုအထင်ကြီးစေရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ salwar-kameez အစုံ၊ kurtas နှင့် Patiala ဝတ်စုံများသည်ပုံမှန်ဝတ်ဆင်ရန်အဆင်ပြေသောရွေးချယ်မှုများပြုလုပ်သည်။ ဖက်ရှင်စီးဖိနပ် - အဝတ်အစားသည်လူကိုပြုလုပ်နေစဉ်သင်ဝတ်ထားသည့်ဖိနပ်အမျိုးအစားသည်သင်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုထင်ဟပ်စေသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ကဲ့သို့သောစနီနာနှင့်ယောင်္ကျားသမားများအတွက်ကျပန်းဘွတ်ဖိနပ်တွင်ရွေးချယ်စရာများစုံလင်စွာပါဝင်သည်။ brogues နှင့်အောက်စဖို့ဝတ်ဆင်အလုပ်မှာပါဝါကြေညာချက်လုပ်ပါ။ သင်၏မာရသွန်အပြေးပြိုင်ပွဲအတွက်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်လေ့ကျင့်ပါ။ တင်းနစ်၊ ဘောလုံး၊ ဘတ်စကတ်ဘောစသည်ဖြင့်တစ် ဦး ချင်းဂိမ်းအတွက်ဖိနပ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ သို့မဟုတ်ခြေနင်း၊ slider နှင့် flip-flops များမှပေါ့ပေါ့ပါးပါးပုံစံနှင့်နှစ်သိမ့်မှုသို့ဝင်ပါ။ ပန့်များ၊ ဖနောင့်ဘွတ်ဖိနပ်များ၊ သပ်ဖိနပ်များ၊ ခဲတံများအပါအဝင်အမျိုးသမီးများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖက်ရှင်ဖိနပ်အမျိုးအစားကိုလေ့လာပါ။ သို့မဟုတ်အလှဆင်ထားသောသတ္တုပြားများဖြင့်နှစ်သိမ့်မှုအကောင်းဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးပုံစံကိုခံစားပါ။ စတိုင်ကျလှပသောပစ္စည်းများ - WoopShop သည်သင်၏ဝတ်စုံများနှင့်ပြည့်စုံသောအဆင့်မြင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက်အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းစျေး ၀ ယ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည်စမတ် analog သို့မဟုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်နာရီများကို ရွေးချယ်၍ ၎င်းတို့ကိုခါးပတ်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ သင်၏အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုစတိုင်ကျကျသိမ်းဆည်းရန်ကျယ် ၀ န်းသောအိတ်များ၊ ကျောပိုးအိတ်များနှင့်ပိုက်ဆံအိတ်များကိုကောက်ယူပါ။ သင်သည်အနည်းဆုံးလက်ဝတ်ရတနာများကိုနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ ခမ်းနားထည်ဝါ။ ဖြစ်စေတောက်ပနေသောအပိုင်းအစများကိုနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းလက်ဝတ်ရတနာစုဆောင်းမှုကသင့်အားအထင်ကြီးစရာကောင်းသည့်ရွေးချယ်စရာများစွာပေးသည်။ ပျော်စရာနှင့်မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်း - WoopShop ရှိကလေးများအတွက်အွန်လိုင်းစျေး ၀ ယ်ခြင်းကပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့မင်းသမီးလေးကတော်တော်လေးဆင်မြန်းတဲ့ဝတ်စုံတွေ၊ ဘဲလေးကသမားဖိနပ်၊ ခေါင်းစီးနဲ့ကလစ်တွေကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းစတိုးမှအားကစားဖိနပ်များ၊ စူပါဟီးရိုးတီရှပ်များ၊ ဘောလုံးဂျာစီများနှင့်အခြားအရာများကိုကောက်ယူခြင်းအားဖြင့်သင်၏သားကိုပျော်မွေ့ပါ။ မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားရန်သင်အမှတ်တရများဖန်တီးနိုင်သောကစားစရာများစာရင်းကိုကြည့်ပါ။ Beauty ဤနေရာတွင်စတင်သည် - WoopShop မှအလှကုန်နှင့်ဖြီးလိမ်းပုံထုတ်ကုန်များဖြင့်လှပသောအသားအရေကိုလန်းဆန်းစေနိုင်သည်၊ ပြန်လည်နုပျိုစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆပ်ပြာများ၊ ရေချိုးခန်းဂျယ်လ်များ၊ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုလိမ်းဆေးများ၊ လိမ်းဆေးများနှင့်အခြား Ayurvedic ထုတ်ကုန်များသည်အထူးအိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုလျှော့ချရန်နှင့်အကောင်းဆုံးသန့်ရှင်းရေးအတွေ့အကြုံကိုပေးစွမ်းနိုင်ရန်အထူးထုတ်လုပ်ထားသည်။ ခေါင်းလျှော်ရည်နှင့်ဆံပင်ထိန်းသိမ်းရေးထုတ်ကုန်များဖြင့်သင်၏ ဦး ရေပြားကိုသန့်ရှင်းစွာထားပါ။ သင်၏သဘာဝအလှအပကိုမြှင့်တင်ရန်မိတ်ကပ်ရွေးပါ။ WoopShop သည်သင်၏နေထိုင်မှုနေရာများကိုလုံးလုံးလျားလျားပြောင်းလဲစေနိုင်သောအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းစျေး ၀ ယ် site တစ်ခုဖြစ်သည်။ အိပ်ရာခင်းနှင့်ကုလားကာများဖြင့်သင်၏အိပ်ခန်းထဲသို့အရောင်နှင့်စရိုက်လက္ခဏာကိုထည့်ပါ။ သင်၏ guests ည့်သည်များကိုအထင်ကြီးစေရန်စမတ်စားပွဲများကိုသုံးပါ။ နံရံအလှဆင်ခြင်း၊ နာရီများ၊ ဓာတ်ပုံဘောင်များနှင့်အပင်တုများသည်သင်၏အိမ်၏မည်သည့်ထောင့်သို့မဆိုအသက် ၀ င်စေမည်မှာသေချာသည်။ WoopShop သည်ဖက်ရှင်ကိုလူတိုင်းလက်လှမ်းမီနိုင်သောကမ္ဘာပေါ်ရှိထူးခြားသောအွန်လိုင်းစျေး ၀ ယ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စျေးကွက်ရှိနောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်နာအဝတ်အထည်၊ ဖိနပ်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်ရောက်ရှိလာသောသူများကိုကြည့်ရှုပါ။ ရာသီဥတုဒဏ်ကိုခံနိုင်သည့်အစဉ်အဆက်ကိုသင်လက်များစွာရနိုင်သည်။ ပွဲလမ်းသဘင်အားလုံးတွင်တိုင်းရင်းသားရိုးရာဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းများကိုအကောင်းဆုံး ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။ ဖိနပ်၊ ဘောင်းဘီ၊ ရှပ်အင်္ကျီ၊ ကျောပိုးအိတ်များနှင့်အခြားအရာများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရာသီအလိုက်လျှော့စျေးများနှင့်သင်သဘောကျမည်မှာသေချာသည်။ ရာသီအကုန်ရောင်းချခြင်းသည်မယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်စျေးသက်သာလာသောအခါအဆုံးစွန်သောအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ ယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့် WoopShop တွင်အွန်လိုင်းစျေး ၀ ယ်ပါ။ WoopShop သည်အွန်လိုင်းစတိုးအားလုံးတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည့်အခြားအကြောင်းအရင်းမှာ၎င်းကိုပေးအပ်ထားသောပြီးပြည့်စုံသောအဆင်ပြေမှုဖြစ်သည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုအမျိုးမျိုးသောကုန်ပစ္စည်းများအတွက်စျေးနှုန်းရွေးချယ်စရာများနှင့်တစ်နေရာတည်းတွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူအတွက်လွယ်ကူသော interface တစ်ခုသည်သင်၏ရွေးချယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်သင့်ကိုလမ်းပြလိမ့်မည်။ ကျယ်ပြန့်သောအရွယ်အစားဇယားများ၊ ထုတ်ကုန်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်သောရုပ်ပုံများကသင့်အားအကောင်းဆုံးဝယ်ယူမှုဆုံးဖြတ်ချက်များချရန်ကူညီသည်။ သင်၏ငွေပေးချေမှုကိုကဒ်ဖြစ်စေ၊ ငွေသားဖြင့်ဖြစ်စေဖြစ်စေရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ (၁၅) ရက်ပြန်လာသည့်မူဝါဒသည် ၀ ယ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်သင့်အားပိုမိုစွမ်းအင်ပေးသည်။ ထို့အပြင်ရွေးချယ်ထားသောထုတ်ကုန်များအတွက် ၀ ယ်ယူရန်ရွေးချယ်မှုသည်ဖောက်သည်များနှင့်အဆင်ပြေချောမွေ့စေပြီးနောက်အဆင့်သို့ရောက်သည်။ သင်သည်သင်၏အိမ်သို့မဟုတ်သင့်အလုပ်ခွင်မှအဆင်ပြေစွာစျေးဝယ်သည့်အခါအခက်အခဲကင်းသောအတွေ့အကြုံကိုခံစားပါ။ သင်၏မိတ်ဆွေများ၊ မိသားစုများနှင့်ချစ်ရသူများအတွက်စျေး ၀ ယ်နိုင်ပြီးအထူးအခါသမယများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ဆောင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရနိုင်သည်။ အန်းဒရွိုက် | iOS ကို
တစ်ဦး Affiliate ဖြစ်လာ
မူပိုင် HAWAFI GROUP LLC © 2021 WoopShop®.
ဖောက်သည် 4.9 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ကို5/ 125831 ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။
Patchwork အနွေးထည်ခေါင်းစွပ် Fleece ချောင်ကျသောအမျိုးသားအင်္ကျီ
ပါဆယ်ထုပ်ကို လက်ခံရရှိချိန်တွင် အပိုကုန်ကျစရိတ်9ယူရို ပေးဆောင်သော်လည်း ကျွန်ုပ်၏ဝယ်ယူမှုအတွက် အလွန်ချိုမြိန်ပါသည်။
ပတ်တီးလှည့်-ဆင်း ကော်လာ ပန်းပွင့် အင်္ကျီလက်ရှည် အင်္ကျီ အမျိုးအစား
Plus Size မြင့်ခါး Elastic Band Skinny Pencil Mom Denim Pant
အရည်အသွေးကောင်းပြီး မြန်မြန်ရောက်ပါတယ်။ အရွယ်အစား အတိအကျ